Ny fitsipika sy ny tahan’ny
Ny fisoratana anarana ianao ihany no mila mamaritra ny lahy sy ny vavy ary ny lahy sy ny vavy ny olona izay maniry ny hihaona. Ary koa mameno fohy ny fampiharana maimaim-poana amin’ny endrika momba ny tenanao sy izay mitady. (Toro-hevitra ny amin’ny fomba tsara indrindra mba hanao toy izany fanontaniana).
Manao ny mombamomba tsara tarehy kokoa amin’ny famoahana azy io ho toy ny sary famantarana ao amin’ny vohikala, na amin’ny alalan’ny fandefasana ny sary amin’ny alalan’ny MMS ny maro ho maimaim-poana. Eo amin ny fisoratam amin’ny asa fanompoana, ianao manaiky fa ny toerana dia mety haseho amin’ny hafa mpampiasa ny fanompoana. Mety tsy ho afaka ny hamaritra ny toerana amin’ny fitendrena ny didy manokana.
Ho an’ny teny fanalahidy, ny mombamomba, dia ho voafaritra tsara ny olona avy amin’ny banky angona Mampiaraka. Ny manomboka ny fifandraisana dia azo atao miaraka na ny hita. Rehetra taratasy, mandritra izany fotoana izany, tanteraka tsy mitonona anarana. Na ianao na ny mpiara-miasa dia tsy mahalala na inona na inona ny fifandraisana vaovao, mandra-samy hafa aza avela.
Taorian’ny fotoam-pitsarana, dia afaka manohy mampita amin’ny alalan’ny SMS. Ny rehetra narahi-mail ho avy any aminareo amin’ny endrika SMS avy manokana isa-panontaniana. Manoratra ny olona iray, dia afaka fotsiny ny valinteny izany ny SMS. Ny vola lany amin’ny fandefasana lahatsoratra iray SMS MMS ny maro dia $. Fandefasana MMS hafatra izay misy ny haino aman-jery afa-po na ny baiko iray, ny isa dia $.
Jereo ny fanompoana Mampiaraka maimaim-poana. Fifandraisana an-tsoratra eo amin’ny tranonkala, mikaroka interlocutors (manavaka ny toerana misy azy) sy ny fijerena ny mombamomba azy (afa-tsy ny pejy voalohany ny fikarohana) ihany koa ireo omena maimaim-poana ho an’ny fanombanana tanjona. Feno fahafahana hahazo ny banky angona manontolo ny mombamomba ampy ho an’ny famandrihana.
Ny vidim $ isan’andro
Koa, ny famandrihana amin’ny vidiny dia tafiditra rehetra, lahatsoratra SMS MMS ao anatin’ny fanompoana Mampiaraka. Taorian’ny fotoam-pitsarana eo amin’ny namany sary, nanome ny famandrihana afaka, ny fifandraisana bebe kokoa no hafatra amin’ny alalan’ny SMS MMS ianao tsy mila mandoa izany.
Afaka mangataka ny sarin’ny mpiantso raha ny mombamomba ahitana filazana fohy»profil sary». Izany dia mitaky ny fandefasana ny SARY amin’ny alalan’ny SMS MMS ny fanadihadiana maro ny interlocutor eo amin’ny sary izay tianao. Ny fangataham-panazavana cost dia MANOSOTRA. ny Fifandraisana dia imbetsaka kokoa rehefa fantatrao fa ny olona hafa fotsiny ao amin’ny manaraka-trano na eny an-dalambe. mba hitanao ny mombamomba ny vahoaka eo akaiky eo, dia tsy maintsy mandefa SMS ny teny hoe»IZA ny MANARAKA»ny isa.
Fangatahana saram roubles
Ianao dia afaka mampitombo mora foana ny fandaharana ny mombamomba azy eo amin’ny fikarohana ny hafa interlocutors, amin’ny alalan’ny fandefasana SMS amin’ny lahatsoratra»VIP»ny isa. Ekipa VIP mahatonga ny mombamomba ny malaza kokoa izy matetika nanolotra ny mpampiasa hafa. Fangatahana saran’ny ny vola lany tamin’ny MANOSOTRA. ny ataon ny ekipa — ora
Fanompoana mampiaraka mikarakara ny fampiononana. Izany no mahatonga ny teny fampiharana dia tsy mahazo:
mampiasa ny rohy sy ny fifandraisana misy (anisan’izany ny dokam-barotra tanjona);
mampiasa teny manafintohina (amin’ny fiteny izay) izay mety hanafintohina ny hafa mpampiasa;
mba handrehetana ny fifankahalàna ara-poko na ny firenena niaviana sy ny lahatsoratra vaovao izay manohitra ny lalàna sa eo ambanin’ny Fehezan-dalàna famaizana. Ny fanompoana dia natao ho an’ny olona taona no ho miakatra.
Raha ny fanitsakitsahana ny fitsipiky ny fahafahana miditra amin’ny asa fanompoana dia mety ho voasakana nandritra ny fotoana ela.
Raha mahita ny mety mampiasa ny service (zaza tsy ampy taona, ny dokam-barotra, karama, asa, sns.), mba mampahafantatra antsika ny momba izany amin’ny alalan’ny fanitsakitsahana ny endrika manokana eo amin’ny mombamomba pejy ny mpampiasa
← USA Karajia - Resaka manohitra ny alahelo, Manahy, tsy misy fisoratana anarana